I-BlitzMetrics: IiDeshbhodi zeendaba zeNtlalo kwiNtengiso yakho | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 30, 2013 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
IBlitzMetrics ibonelela ngedashboard yoluntu ejonga idatha yakho kuwo onke amajelo akho kunye neemveliso kwindawo enye. Akukho sidingo sokukhangela iimetrikhi kuwo onke amaqonga ahlukeneyo entlalontle. Inkqubo inikezela ngengxelo kubalandeli bakho abaphezulu kunye nabalandeli ukukunceda wakhe ulwazi malunga nophawu, ukubandakanyeka kwaye ekugqibeleni-uguquko.
Uninzi lwazo zonke, i-BlitzMetrics inceda abathengisi ukuba baqonde ukuba ngowuphi kwaye yeyiphi eyona nto isebenzayo ukuze uhlengahlengise umyalezo wakho ngokwento eyenza abalandeli bakho bonwabe.
Iimpawu zeBlitzMetrics kunye neziBonelelo
Jonga umxholo kuyo yonke i-Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tumblr
Yenza iingxelo ezintle zesiko.
Ibhentshi ngokuchasene nabakhuphisana nabo.
Landa umkhondo wakho Ixabiso leMedia Media.
Funda ukuba loluphi uhlobo lwabantu olusebenzayo.
Fumanisa xa umxholo wakho usenza ezona mpembelelo.
Phucula ukufikelela kwakho kunye nokuzibandakanya ngokulandelela ukusebenza komxholo.
Jonga i-Newsfeed yakho Inqanaba lokufunda kunye neNgxelo.
Fikelela idatha yakho naphina kuso nasiphi na isixhobo.
tags: ukusebenza komxholoiideshibhodilwabantulifumene ixabiso leendabaNxaxhebaFacebookfansinqanaba lengxeloinstagramiideshibhodi zentlaloii-dashboards zosasazo zasekuhlaleniTumblrTwitteryoutube
Jun 8, 2013 ngo-4:39 AM
Doug- wow, enkosi ngophononongo!
Ndicela uxolo khange ndiyiqaphele ngaphambili.
Nceda undazise ukuba kukho nasiphi na isicelo onaso malunga nokuba singenza njani ezi dashbhodi zibengcono!